Isbarbardhigga kamaradaha u dhexeeya iPhone 7 Plus iyo Galaxy Note 7 | Wararka IPhone
Isbarbardhigga kamaradda u dhexeeya iPhone 7 Plus iyo Galaxy Note 7
Qolka Ignatius | | Tartanka, iPhone 7
Mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee cusub ee iPhone 7 Plus uu na keenay waa xaqiijinta wararka xanta ah ee tilmaamaya inay hirgelin karto laba kamaradood, laba kamaradood oo ah waxay na soo bandhigaysaa laba ujeedo: xagal ballaadhan iyo muraayadaha telephoto. Apple waxay go'aansatay inay doorto inay u isticmaasho teknolojiyaddan inay tahay cunsur lagu kala soocayo nooca 4,7-inji oo dheeri ah marka lagu daro raacitaanka isbeddelka hirgelinta laba kamaradood ee casriga ah. LG, Huawei, Oppo waa qaar ka mid ah soo saarayaasha horayba ugu soo bandhigayay suuqa aalado laba kamaradood dhowr bilood ah. Tan iyo Jimcihii la soo dhaafay, qaar badan ayaa nasiib badan kuwaas oo durba ku raaxeysanaya qaabkan cusub oo, sida uu sheegayo Apple, noo oggolaan doonta inaan qaadno sawirro cajiib ah.
Laakiin illaa aan ka aragno ficil ahaan, ma awoodi doonno inaan xaqiijino haddii hadalkaasi runti run yahay ama uu yahay astaanta caadiga ah ee ay ku sheegeen inta ay soo bandhigeen. Safwan Ahmedia, kanaalka uu ku leeyahay YouTube-ka ee SuperSaf TV, ayaa isbarbar dhig ku sameeyay taas waxaan ku arki karnaa ficil ahaan isla waqtigaasna kamarada iPhone 7 Plus iyo tan Samsung Galaxy Note 7.
Fiidiyowga aan kor ku tusno waxaad ka arki kartaa natiijada isbarbardhigga. Isbarbardhigga duubista fiidiyowga, iyo sidoo kale sawirrada maalin cad ama xaaladaha iftiinka hooseeya sida muuqaalka ugu badan ee Galaxy Note 7, waxaan arki karnaa sida guuleystaha isbarbardhiggan uu u yahay nooca Samsung. IPhone 7 Plus wuxuu leeyahay aafaragelinta xad-dhaafka ah ee sawirada, marka lagu daro sameynta buuq badan ee sawirada iftiinka hoose iyo lahaanshaha kala duwanaansho aad u liita.
Haddana Samsung ayaa mar kale ka sarreysa iPhone-ka tayada kamaradda. Ka dib markii la bilaabay Samsung S7 Edge, horaantii sanadkan, kamaradda S7 ayaa sidoo kale heshay, iyo illaa hadda, kamaradda iPhone 6 Plus.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Isbarbardhigga kamaradda u dhexeeya iPhone 7 Plus iyo Galaxy Note 7
Waxaa jira hal shay oo maskaxda lagu hayo: barnaamijka loogu talagalay kamaradda laba-geesoodka ah wali lama sii deynin, waxay ku yiraahdeen Muhiimka. Waa bar bar dhig.
Waxa aan weli la bilaabin ayaa ah ikhtiyaarka lagu qarin karo asalka. Taasi wax shaqo ah kuma laha tayada meesha iPhone 7 wax badan lumiso.
Ku jawaab Juan Luis
Hadda isku day isbarbardhig kale oo ah halka loo yaqaan 'pro-droid' ee supertonto uusan ahayn kan sameeya fiidiyowga, waa niyadjab sida Samsung markasta loo tuuro, laakiin waxa aanan sharraxin waa sida aadan u ogaan
Ka raadi internetka waxaadna arki doontaa inuusan isagu keligiis ahayn oo sheeganaya in kaameradda Note 7 ay ka fiican tahay. YouTube-ka ayaa buuxa.
Ku dhowaad dhammaan faallooyinka ku jira golayaasha khaaska ah ayaa sheegaya in dhowr bilood ka hor kamaradda Dual oo ay ku jiraan qalad sannado ka hor lg waxay soo saartay taleefanka gacanta oo leh laba kaamiro si sawirro looga qaado ama fiidiyoow haddii aanan ku xumaan 3d iyo meesha htc ka tagto aniga oo leh m8 wuxuu ahaa horudhaca kamaradaha laba-geesoodka ah, waxa kaliya ee fashilmay wuxuu ahaa xallinta ultrapixel, mahadsanid
Muhiim maahan inaad aado bogagga caanka ah ee android. Farqiga udhaxeeya sawirada si cad ayaa loo arki karaa, sidoo kale waa iftiin iphone-ka iyo midab lumis. Aad ayuu uga duwan yahay Samsung. Qiimaha iphone-ka cusub, tayada sawiradu waa inay mar hore fiicnaadaan
Waxaan ka jeclahay sawirada galaxi inbadan, uguyaraan sawirka boostada, kani wuxuu sifiican ugu dhadhansanayaa dhadhankeyga, laakiin si daacad ah wuu iisaga leexanayaa, anigu ma ihi sawirqaade, 7-dii ayaan iibsaday si kasta
Ku guuleyste cad Xusuusin 7. Apple, waad i niyad jabisay markale. Haddii aad higsaneysay kamarad wanaagsan (gaar ahaan Dual Lens Plus) markaa waxaan u maleynayaa inaad guuldareysatay.
Guusha waa samsung? Waan ka baxay! Haddii xitaa sawirka aad gashatay daboolka ay cadahay in iphone-ka uu ka fiican yahay! Midabbo kafiican, iftiin fiican, iwm, oo lamid ah fiidiyaha.
Laakiin haddii uu gubto, waan ka baxaa.
Ku jawaab Cocacolo
Waxaad ka haysataa figrad yar sawir qaadashada marka loo eego fiisikiska tirada ...
Ku jawaab Yopyop
Ma sameyn karin isbarbardhiga sababtoo ah kuma bixin doono dinaar Samsung, laakiin waxa aan dhihi karaa waa inaan sawir la galo iPhone, oo waxaan leeyahay mid kasta, waa sida aad u sameyso iyo waxa ay leedahay oo dhan, marka ... haddii ay kaliya tahay in diirada la saaro oo loo toogto taas, waxaa lagu sameyn karaa mobilo qolof ah oo aan macno lahayn 😉
Laakiin isbarbardhiggu wuxuu iila muuqdaa mid aan aniga ii cuntami karin, xitaa ma ogin sida hal sawir loo qaaday iyo mid kale, waxaana ku adkeysanayaa, maxaa yeelay waxay kuxirantahay sida loo sameeyay.
Hahaha Maaha arrin lagu hayo dhadhanka fudud ee Apple oo kooban, qoraalka 7 ayaa sawiro ka fiican qaada. Anigu waxaan ahay taageere Apple waxaanan marwalba ka doorbidi jiray wax soo saarka tufaaxa kuwa Samsung, laakiin sida loo difaaco kuwa aan la aqbali karin "Kaliya waxyaabo aan jirin"
Samsung waxay si kal iyo laab ah raaligalin uga bixineysaa dhibaatooyinka Galaxy Note 7
Caabbinta biyaha ee iPhone 7 oo qoto dheer 10 mitir ah